တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ဂမ်ဗလာ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့် မြန်မာ့အတိုက်အခံ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို.၏စကားများ	August 21, 2008
အရင်တုန်ကဆိုရင် မစ္စတာဂမ်ဘာရီနှင့်တွေ.ဆုံဖို.မောင်သန်းရွှေကသာ Refuse ငြင်းပယ်လုပ်တတ်ပြီး အခုကျတော့ ဒေါ်စုကလုပ်တာဟာ အတော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်လို.သုံးသပ်ရပါသည်၊ သူ၏ဒီတစ်ခေါက်ခရီးစဉ်ဟာ စစ်အစိုးရရဲ.ဖိတ်ကြားချက်နဲ.လာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်၊ မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ခရီးစဉ်ဟာ ကာလဒေသနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသလို စစ်အစိုးရ၏ အကြပ်ကိုင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်လာမည့်နှစ်(၂၀၁၀)အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်္ကဝုတ္တိနည်း(ခ)သွယ်ဝိုက်နည်း ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသည့်သဘောဖြစ်နေသည်၊ ပြီးတော့၊ မစ္စတာဂမ်ဗလာအနေနဲ.သူရဲ.နောက်ဆုံးအခေါက်ခရီးစဉ်တုန်ကလဲမောင်သန်းရွေနှင့်လည်တွေ.ဆုံခွင့်မရ၊တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ၊မစ္စတာဂမ်ဗလာဟာစစ်အစိုးရလိုအပ်ရင်လာပြီးမလိုအပ်ရင်ခွာတဲ့သံတမန်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါသည်၊ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်၊ဒေါ်စုအနေနဲ.ဂမ်ဗလာနဲ.တွေ.ဖို.ငြင်းပယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို.သုံးသပ်လိုက်ရပါသည်၊
U.N. ENVOY MEETS WITH A RANGE OF MYANMAR LEADERS On his third day in Myanmar, the Secretary-General’s Special Adviser, Ibrahim Gambari, met with the ministers of Planning and Health with whom he discussed ways to address socio-economic conditions. He also held 10 separate meetings with political parties and civil society groups, including members of the Central Executive Committee of the National League for Democracy, student representatives and elected individuals from the 1990 elections. The discussions focused on the need for inclusive national dialogue,acredible political process, and ways to address socio-economic challenges.
To contact the reporter on this story: Daniel Ten Kate in Bangkok at dtenkate@bloomberg.netLast Updated: August 20, 2008 23:59 EDT